The obere akpa Digital na ọdịnihu nke ịkwụ ụgwọ | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 1, 2011 Wednesday, November 30, 2011 Douglas Karr
Na 2011, ọnụọgụ azụmahịa ịkwụ ụgwọ ekwentị zuru ụwa ọnụ ga-erute $ 241 ijeri mana site na 2015, a na-atụ anya na ọ gafere $ 1 trillion! O doro anya na ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ kaadị kredit ọ bụla na ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ịntanetị na-arụsi ọrụ ike na-etinye ọtụtụ narị nde dollar n'ime Near Ubi Nkwukọrịta teknụzụ na usoro ịkwụ ụgwọ.
Site na mmụba nke netwọkụ na brọdband, ụzọ anyị si akwụ ụgwọ maka ihe ga-agbanwe n'ụzọ dị egwu n'afọ ole na ole sochirinụ. Anyị si na shells na chaplet bịa na akwụkwọ ego na kaadị akwụmụgwọ ebe niile na puku afọ ole na ole.
Tags: obere akpa dijitalụugwo ugwona nso nso nkwukọrịtanfc